မိဘနဲ့ သားသမီး ဆက်ဆံရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မိဘနဲ့ သားသမီး ဆက်ဆံရေး
မိဘနဲ့ သားသမီး ဆက်ဆံရေး
Posted by မောင်လင်းငယ် on Sep 7, 2010 in Drama, Essays.. |2comments
မိဘနဲ့ သားသမီးတိုရဲ့ ယနေ့ ဆက်ဆံရေး
မိဘနဲ့ သားသမီး ။
ဒီစကားလုံး နှစ်လုံးက လောကအဘိဓာန်ထဲမှာ အလွန်အရေးပါတဲ့ စကားလုံးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံး နှစ်လုံးကြားမှာ ရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးက ကမ္ဘာ့ကြီးတစ်ခုကို အရောင်ပြောင်းသွားဖို့ တွန်းအားတစ်ခု သို့မဟုတ် ဆွဲအားတစ်ခုလည်း ဖြစ်သွားနိူင်ပါတယ်။
အခုခေတ် ကျွန်တော်တို့ ဆီက မိဘနဲ့ သားသမီး ဆက်ဆံရေးက အလွန်ကို ကွာဟမူတွေ များနေပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး နားလည်မူကလည်း ဘာမှ မဆိုင်သလို နေကြတဲ့ မိသားစုတွေကလည်း အများကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ သားသမီးက မိဘကို နားမလည်တာမျိုး၊ မိဘက သားသမီးကို နားမလည်တာမျိုး စတဲ့ သတင်းတွေ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲလိုလို ကြားနေပါတယ်။ ဒါအပြင့် မိဘနဲ့ သားသမီးတွေကြား နားလည်မူတွေ မရှိကြလို့ ဆူညံပေါက်ကွဲမူတွေ၊ ဆဲဆိုသံတွေ၊ ရိုက်နှက်သံတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အမြဲလိုလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါက ဘာကြောင့် မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ နားမလည်နိူင်ကြတာပါလဲ??? သားသမီးက မှားတာများလား??? ဒါမှမဟုတ် မိဘက မှားတာများလား???
ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေက အခြေအနေအရပ်ရပ်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိူင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ …. အိမ်မှာ ဘာမှ ကူညီလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိဘဲ မိဘအပေါ် ပြန်လှန်ပြောဆိုတဲ့ သားသမီးတွေ ဆိုရင် သားသမီးက မှားတာပါ။ ပြီးတော့ အိမ်မှာ အရက်ထိုင်သောက်ပြီး အိမ်မူကိစ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ နေတဲ့ သားသမီးတွေအပေါ် ငေါက်ငမ်းပြောဆို ရိုက်နှက်နေမယ်ဆိုရင် မိဘက အများကြီး မှားသွားပါပြီ။
မိဘနဲ့ သားသမီး ကြားမှာ နားလည်မှု ဆိုတာကတော့ အဆင်မပြေတဲ့ မိသားစုတစ်ခုအတွတ် အကြောင်းပြချက်တွေ အများကြီး ထွတ်လာနိုင်သလို ၊ အဆင်ပြေ အေးချမ်းနေတဲ့ မိသားစုအတွတ် နားလည်မှုဆိုတာ သူတို့ စဉ်းစားမိမှာတောင်မဟုတ်ပါဘူး။……..
အဆင်ပြေနေတဲ့ မိသားစုလေး ဖြစ်ဖို့ နားလည်မှု က အရေးကြီးသလို နားလည်မှု တည်ဆောက်တဲ့အခါ စကားလုံ တစ်လုံးနှစ်လုံး လောက် ကတိလေး တစ်လုံးနှစ်လုံးလောက်နဲ့ လဲ မပြည့်စုံနိုင်ပါဘူး။…..
အဆင်ပြေတဲ့ ဆက်ဆံ ရေးလေးရဖို့ ဆိုရင်တော့ မှားတာမှန်တာတွေထက် ၊ နားလည်မှုပေးနိုင်ဖို့က ပိုအရေးကြီး မယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်က အရင်စပြီးတော့ နားလည်မှု ပေးပါ ၊ ကိုယ့် လိုချင်တဲ့ ဆက်ဆံ ရေးပုံစံ လေး ကိုသူသိလာအောင်ပြပါ
အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ နားလည်မှုပေးပြီးတော့ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရမလဲ ဆိုတာကတော့ အချိန်တော့ယူရမှာပေါ့ ။ စိတ်ရှည်ရမှာပေါ့ ၊ ရချင်မှလဲ ရမယ် ၊
ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ဒီအမူ အကျင့် နေခဲ့ တဲ့ နှစ်တွေ နည်းမှမနည်းတာ……
ဒါပေမယ့် ကိုယ် တကယ်လိုချင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးပုံစံလေး ကိုတော့ သူအသိအမှတ်ပြု လာမယ် ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။ တစိမ်းတွေမှမဟုတ်တာ မိသားစုဘဲ လေ………….
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော မိသားစု လေးတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ စုတောင်းလိုက်ပါတယ်။